Amenorrhea (ရာသီထိမ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Amenorrhea (ရာသီထိမ်ခြင်း)
Amenorrhea (ရာသီထိမ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ရာသီထိမ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပုံမှန်လာရမယ့် ရာသီသွေးမဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်သည် တစ်လတစ်ကြိမ် ရာသီသွေးပုံမှန်ဆင်းပါတယ်။ ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု၊ မျိုးပွားအင်္ဂါဖွဲ့စည်းမှု ပေါ်မူတည်၍ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရာသီလာပုံ ကွဲပြားချက်များရှိတတ်ပါတယ်။ ရာသီထိမ်ခြင်း နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
မွေးကတည်းက ရာသီမလာဖူးခြင်း(Primary Amenorrhoea)။ ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည် အပျိုဖော်ဝင်ချိန်တွင် အခြားသော အင်္ဂါရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးပြည့်စုံ သွားသော်လည်း အသက် ၁၅ နှစ်ကျော်သည့်တိုင် ရာသီတစ်ခါမှ မလာဖူးခြင်း။
ရာသီသွေး သုံးကြိမ် သို့မဟုတ် ၆ လ ဆင်းပြီးနောက် တစ်ခါမှ ထပ်၍ ရာသီသွေးမဆင်းတော့ခြင်း (Secondary Amenorrhoea)
ဆရာဝန် နဲ့ သေချာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးမှ ရောဂါ ကောက်ချက်ချနိုင်မည်။
Amenorrhea (ရာသီထိမ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ရာသီထိမ်ခြင်းသည် အဖြစ်များသော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်တွင်း လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ ညီညွတ်မှုမရှိခြင်းကို ပြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ရာသီထိမ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း ဟော်မုန်းများသည် သားဥကြွေခြင်း နဲ့ ရာသီသွေးဆင်းခြင်းကို ရပ်တန့်ထားလို့ပါ။ မွေးကတည်းက ရာသီမလာသော အမျိုးအစား (Primary Amenorrhoea)သည် ၁၅ နှစ်ကျော် မိန်းကလေးများတွင် အဖြစ်များပြီး ဒုတိယအမျိုးအစား (Secondary Amenorrhoea) သည် အသက်ကြီးသော အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များပါတယ်။
Amenorrhea (ရာသီထိမ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရာသီထိမ်ခြင်း အစကနဦး လက္ခဏာမှာ ရာသီသွေးမဆင်းဘဲ ဓမ္မတာပျောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ လက္ခဏာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
နို့သီးခေါင်းမှ နို့ရည်ကဲ့သို့ အရည်များထွက်ခြင်း
အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာ မပါဝင်တဲ့ အခြားသော လက္ခဏာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများ ရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန် နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
သင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်တွေထဲက တစ်ခုခု ရှိခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
အသက် ၁၅ နှစ် အထိ ရာသီတစ်ခါမှ မလာဖူးခြင်း
သင့်မှာ အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုများ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Amenorrhea (ရာသီထိမ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရာသီထိမ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများကို အောက်တွင်ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်များ ။ ။ မဖွံ့ဖြိုး သော မျိုးပွားအဂါၤများ -သားအိမ်ခေါင်းအ၀ ကျဉ်းခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊ သားအိမ် သို့မဟုတ် မိန်းမကိုယ် မပါလာခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်အဂါၤ နှစ်ပိုင်းကွဲနေခြင်း (vaginal septum)
ဟော်မုန်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ။ ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ ကလေးနို့တိုက်ချိန်နဲ့ သွေးဆုံးချိန် များတွင် ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့် ရာသီထိမ်တတ်ပါတယ်။
ဆေးကြောင့်ရာသီထိမ်ခြင်း။ ။ တချို့ ဆေးများသည် ရာသီထိမ်စေပါတယ်။ ထိုဆေးများတွင် သန္ဓေတားဆေးများ ၊ စိတ်ရောဂါဆေးများ ၊ စိတ်ကျကုသဆေးများ ၊ သွေးထိန်းဆေးများ ၊ ကင်ဆာရောဂါ ဓါတုကုထုံးဆေးများ နဲ့ အလတ်ဂျစ်ဓါတ်မတည့် ရောဂါကုသဆေးများ ပါဝင် ပါတယ်။
ပိန်ချုံးခြင်း ။ ။ ပုံမှန်ရှိသင့်သည့် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း အောက် ကျဆင်း နေရင် ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ ဖြစ်၍ သားဥကြွေခြင်းကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေ မျိုးကို ဝမည်ကိုစိုးရိမ်၍လွန်ကဲစွာအစားအသောက် ထိန်းချုပ်သော အမျိုးသမီးများနဲ့ အစားကို ထပ်ကာ ထပ်ကာစားမိပြီးမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင် ကြောက်ရွံ့နေတတ်သော စိတ်ဝေဒနာ သည်များ(Builimia)တွင် တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း ။ ။ စိတ်ဖိစီးမှုသည် ဦးနှောက်တွင် ရှိသော ရာသီစက်ဝန်းကို ထိန်းချုပ် ပေးသည့် Hypothalamus ၏ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ခြင်း ဟာခဏတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းသွားသောအခါ ရာသီစက်ဝန်းလည်း ပုံမှန် အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်း အလွန်အကျွံလုပ်ခြင်း ။ ။ ပြင်းထန်သော လေ့ကျင့် မှုများပြုလုပ်ရသည့် အားကစားမျိုးသည် ရာသီစက်ဝန်းကို နှောင့်ယှက်တတ်ပါတယ်။
ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများ ။ ။ သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်အများအပြားရှိ သော ရောဂါ (Polycystic ovary syndrom) ၊ လည်ပင်းသိုင်းရွိုက်ရောဂါ ၊ ဦးနှောက်တွင်းရှိ pituitary ကင်ဆာ သို့မဟုတ် အရွယ်မတိုင်ခင် သွေးဆုံးခြင်းတို့သည် ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်စေ ပါသည်။
Amenorrhea (ရာသီထိမ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ရာသီထိမ်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
မိသားစုရာဇဝင်။ ။ သင့်မိသားစုထဲတွင် ရာသီထိမ်သော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိရင် သင်လည်း အလားတူ ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်
အစားအသောက်မမှန်ခြင်း။ ။ သင့်တွင် ဝမည်ကို စိုးရိမ်၍လွန်ကဲစွာ အစားအသောက် ထိန်းချုပ်ခြင်း နဲ့ အစားကို ထပ်ကာ ထပ်ကာ စားမိပြီးမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ကြောက်ရွံ့ နေတတ်သော စိတ်ဝေဒနာ(Builimia)ရှိရင် ရာသီထိန် နိုင်ချေများပါတယ်
အားကစား လေ့ကျင့်ခန်းများ။ ။ အပြင်းအထန် လေ့ကျင့်ရသော အားကစားများသည် ရာသီထိမ်နိုင်ချေ မြင့်မားစေပါတယ်။
ယခု ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များမှာ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံပေးချက်များ နေရာတွင် အစားထိုးရန် မသင့်တော်ပါ။ ဆက်လက်သိရှိလိုသော အချက်အလက်များအတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် နဲ့အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Amenorrhea (ရာသီထိမ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင်၏ဆရာဝန်သည် အောက်ဖော်ပြပါ ရောဂါ အတည်ပြုရန် အောက်ဖော်ပြပါ စမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ရောဂါရာဇဝင်မေးခြင်း၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
လိုအပ်လျှင် ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်
Pituitary သို့မဟုတ် hypothalamus တွင် မူမမှန်မှုများ သံသယရှိလျှင် ဦးနှောက်ကိုသံလိုက် ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း (MRI) ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သားအိမ်နဲ့ သားဥအိမ် မူမမှန်မှုများ သံသယရှိလျှင် ဗိုက်နဲ့တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါများကို ကွန်ပျူတာ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း (Computed Tomography) ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Amenorrhea (ရာသီထိမ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသနည်းသည် ရာသီထိမ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းပေါ်တွင် မူတည်သည်။ မွေးကတည်းက ရာသီမလာ သော Primary Amenorrhoea လိုရောဂါမျိုးသည် မွေးရာပါ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုရောဂါ ကို ကုသရန်ဟော်မုန်းဆေးများ သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ရန် လိုအပ်သည်။ နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ကုသရန်လိုအပ်သည် လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့ အခြေအနေများတွင် Medroxyprogesterone သို့မဟုတ် Oestrogen ဟုခေါ်သော ဟော်မုန်းဆေးများ ပေးခြင်းဖြင့် ရာသီပြန်လာအောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။
တခြားဆေးများသည် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းသောရောဂါ (Hypothyroidism)၊ အရွယ်မတိုင်ခင် သားဥအိမ် အလုပ်မလုပ်တော့သော ရောဂါ (Premature Ovarian Failure) နဲ့ အသက်ကြီးချိန်မှ ရောဂါလက္ခဏာစပြသော မွေးရာပါ adrenal gland မကောင်းသော ရောဂါ (Adult-onset congenital adrenal hyperplasia) ခံစားနေရသော အမျိုးသမီးများတွင် အသုံးပြုပါတယ်။
ခန္ဓါဗေဒဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းနေသော အမျိုးသမီးများသည် ခွဲစိတ်မှုခံယူရန် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သားဥအိမ်တွင်း ရေအိတ်များစွာတည်နေသော ရောဂါ(PCOS) ခံစားနေရသော အမျိုးသမီးများသည် အစားအသောက်ဂရုစိုက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၍ အလေးချိန်ထိန်းရန် လိုအပ်ပါတယ်။ Metformin ကဲ့သို့သော ဆေးများလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်။
မျိုးရိုးလိုက် ရာသီထိမ်ခြင်းကို ခံစားနေရသော အမျိုးသမီးများအတွက်မူ မျိုးရိုးဗီဇ အထူးကုပညာရှင် နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကုသမှုများလုပ်သင့်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်းက ရာသီထိမ်ခြင်းကို ကုသရာမှာ ဘယ်လို အထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ကုထုံးများက သင့်အနေနဲ့ ရာသီထိမ်ခြင်းကို ကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေသူ သို့မဟုတ် အထူးကု နဲ့ပုံမှန် ပြသပါ။
ဆေးသောက်ခြင်း၊ ဆေးပမာဏပြောင်းလဲခြင်းကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက် ပါ။
ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ နဲ့မတိုင်ပင်ဘဲ ဆေးဆိုင်မှ အလွယ်တကူဝယ်၍ ရသော ဆေးများ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်မှ ဖော်စပ်ထားသော ဆေးများ နဲ့အခြားဆေးများကို မသောက်သုံးပါနဲ့။
ရှိသင့်သော ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းထားပါ။ မျှတသော အစားအသောက် စားသုံးပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း အလွန်အကျွံ မလုပ်ပါနဲ့။ ပြင်းထန်သော အလုပ်များမလုပ်ပါနဲ့။
အကယ်၍ သင့်မှာ မေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် သင့်တော်တဲ့ အဖြေရှာဖွေနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 6, 2018
Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,2012. Downloaded version.
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., &amp;
Albert, R. K. (2009). The Merck manual home health handbook. Whitehouse Station, NJ,
Merck Research Laboratories. Page 1524
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/amenorrhea/basics/definition/con-20031561 Assessed Jul 11 2016Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor.